ATỤMATỤ NJIRIMARA OHERE NA IHE NTANETỊ - NGWA - 2019
Atụmatụ njirimara ohere na ihe ntanetị
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbasa ihe ahụ na Photoshop, ịnwere ike iji Usoro mmekọrịta. Usoro a nwere ike ịbawanye ma belata mbido mbụ ahụ. Enwere ọtụtụ ụzọ dị iche iche nke usoro mmekọrịta; ụzọ dị iche na-enye ohere inweta oyiyi nke àgwà ụfọdụ.
Dịka ọmụmaatụ, ọrụ nke ịba ụba nke mbido mbụ ahụ gụnyere ịmepụta ihe mgbakwunye ndị ọzọ, ụda olu ya na-ejikọta pixels dị nso.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ọ bụrụ na pixels nke oji na ọcha dị n'akụkụ n'akụkụ na foto mbụ ahụ, ka a na-eme ka onyinyo ahụ gbasaa, pixel ọhụrụ nke isi awọ ga-apụta n'etiti abụọ pikselụ abụọ ahụ. Ihe omume ahụ na-ahọrọ ụcha achọrọ site na ịgbakọ ọnụọgụ dị elu nke pikselụ dị nso.
Usoro Ntughari Nkọwa
Isi ihe "Mkpakọrịta" (Foto dị mma) nwere ọtụtụ ihe ọ pụtara. Ha na-apụta mgbe ị na-atụgharị òké cursor n'elu àkụ áká na-egosi ebe a. Tụlee akụkụ nke ọ bụla.
1. "Na-esote" (Onye agbata obi kacha nso)
Mgbe a na-eji usoro ntanetị eme ihe n'oge na-adịghị anya, n'ihi na àgwà nke nnukwu akwụkwọ ahụ ezughị ezu. N'okwokwuru ihe oyiyi, ị nwere ike ịchọta ebe ebe mmemme ahụ gbakwunyere pikọn ọhụrụ, nke a na-emetụta mmetụta dị mkpa nke usoro ịme ihe. Usoro ihe omume ahụ na-etinye pixel ọhụrụ mgbe ebutere ya site na iṅomi ndị dị nso.
Mgbe ịmechara ihe dị na usoro a, ị ga-enweta ihe oyiyi nke àgwà dị mma. Photoshop ga - emepụta pikselụ ọhụrụ site na ịgbakọ nchara ụcha nke pikselụ agbata obi, ya mere nsụgharị nsụgharị agaghị adị anya.
3. "Ụgha" (Bicubic)
A na-atụ aro ka ị jiri ya iji nwetakwuo ọnụ ọgụgụ na Photoshop.
Na Photoshop CS na elu, kama usoro ọkọlọtọ ọkọlọtọ ahụ, abụọ algorithm nwere ike ịchọta: "Ịgba aghara na-egbuke egbuke" (Bicubic smoother) na "Bicubic ghọtakwuo" (Bicubic sharper). Iji ha mee ihe, ịnwere ike ịmepụtawanye ma ọ bụ belata ihe oyiyi na mmetụta ọzọ.
Na usoro ogwu maka ịmepụta pikselụ ọhụrụ, a na-eme atụmatụ nke mgbagwoju anya nke ọtụtụ pikselụ dị n'akụkụ ya, na-enweta ezigbo àgwà oyiyi.
4. "Mgbagwoju anya" (Bicubic smoother)
A na-ejikarị mee ka foto dị na Photoshop nso, ma ebe agbakwunyere pixụ ọhụrụ adịghị egbu.
5. "Bicubic ghọtakwuo" (Bicubic sharper)
Usoro a zuru oke maka ibudata, na-eme ka foto ahụ doo anya.
Ihe atụ nke itinye uru "Ịgba aghara ịkụ"
Ka e were ya na anyị nwere foto a ga-ebuwanye ibu. Foto nha -
531 x 800 px na ikike 300 dpi.
Iji rụọ ọrụ mbugharị ị chọrọ ịchọta na menu "Foto - Ọdịdị Foto" (Foto - Foto foto).
N'ebe a, ị ga-ahọrọ ihe dị n'okpuru. "Ịgba aghara na-egbuke egbuke"ma weghachite onyinyo ihe dị na percentages.
Ná mmalite, ihe odide mbụ ahụ metụtara 100%. A ga - ebuli elu na akwụkwọ ahụ na nkebi.
Nke mbụ, mee ka ọnụ ọgụgụ dịkwuo ukwuu 10%. Iji mee nke a, gbanwee onyinyo ahụ na 100 na 110%. Ọ bara uru ịtụle na mgbe ị gbanwere obosara, usoro ihe omume ahụ na-edozi elu dị elu. Iji chekwaa nha ọhụrụ, pịa bọtịnụ ahụ. "OK".
Ugbua foto a bụ 584 x 880 px.
Ụzọ a ị nwere ike ịbịgharịa dịka ị chọrọ. Ihe doro anya nke onyinyo ahụ dị elu dabere n'ọtụtụ ihe. Ndị isi bụ àgwà, mkpebi, nha nke mbido mbụ ahụ.
O siri ike ịza ajụjụ banyere otu ị ga-esi gbanyegharịa iji nweta foto dị mma. Enwere ike ịchọta nke a naanị site n'ịmalite ọganihu site na iji usoro ihe omume ahụ.